ပထမကျော်ဘွဲ့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆန်ကာ ထပြန်ခဲ့တဲ့ အရှင် – Shwe Yaung Media
ပရိယတ္တိ နယ်ပယ်မှာ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး များစွာ ရှိရာမှာ ပထမကျော်ဘွဲ့သည် လည်း စာသင်သားတိုင်း လိုလား တောင့်တ တန်ဖိုး အထားဆုံး ဘွဲ့ တစ်ခုပင်ဖြစ် ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အဆင့်အတန်းမြင့် ဘွဲ့တံဆိပ် ကို ရရှိ ခဲ့ပေမဲ့ ဘွဲ့ကို
လက်ခံ ယူ ဖို့ ငြင်းဆန် ခဲ့တဲ့ အရှင်မြတ် တစ်ပါး ရှိခဲ့ဘူး ပါ တယ်။ပထမကျော်ဘွဲ့ကို ငြင်းဆန် ခဲ့တဲ့ အရှင်မြတ် က အရှင်သေဋ္ဌိလာဘိဝံသ မထေရ်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။
ဘာကြောင့်ပါလဲ ၊ ဘယ်ခေတ်ကပါလဲ ဆို တာကတော့အရှင်သည် ၁၉၁၈-ခုနှစ်၊ ကောဇာ ၁၂၈၀-ခု နှစ်တွင် အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ပထမ ကျော်စာမေးပွဲမှာ တနိုင်ငံလုံး မှာ ပထမရရှိ ခဲ့သော်လည်း အင်္ဂလန် ဘုရင်ခံထံ
ဘွဲ့ခံရမည့် စာအောင် သံဃာက = ကျောင်းသားပမာ ဘုရင်ခံက အထက် ရဟန်းသံဃာက အောက် ကနေ ဘွဲ့ကို ခံယူရမှာဖြစ်တာကြောင့် မခံယူ ပဲ ငြင်းဆန် ခဲ့ကာ ထပြန် သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါ ဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူ စရာ ၊ အတုယူ စရာ ကောင်းလိုက်သလဲ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေ ရမှာပါ။အင်္ဂလန်တွေ က သူတို့ကို သူတို့သာ ဂုဏ်သရေ ရှိ လူမျိုးဟု ထင်တတ်ကြပြီး အခြားလူမျိုးတွေ ကို အထင်သေးစွာ ဆက်ဆံ
တတ်ကြပါတယ်။အဲဒီလို ရဲ့ရင့်စွာ ပထမကျော်ဘွဲ့ကို ငြင်းဆန် ခဲ့သော အရှင့်ကို မန္တလေးတိုင်း ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်- အရှေ့ဘက် ငါးမိုင် အကွာ ပုတီးကုန်းရွာ ဦးအေး+ဒေါ်ထွေးတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး -၁၃-နှစ် မှာ ရှင်သာမဏေဝတ်
အသက်၂၀-မှာ ဘဒ္ဒန္တ အာဒိစ္စဝံသမထေရ် ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုကာ ရဟန်း ဘဝရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အရှင်သည် ရဟန်း တစ်ဝါအရ တွင် စေတိယင်္ဂ ဏ စာသင်တန်း.သကျသီဟ စာသင်တန်းတို့ ကို တနှစ်ထဲ အောင်မြင်ခဲ့ကာ – ရဟန်းနှစ်ဝါ မှာ ပထမကျော်တန်း ကို အောင်မြင်ခဲ့ကာ ယင်း ပထမကျော်ဘွဲ့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့တာ
ဖြစ်ပါတယ်။ရဟန်းသုံးဝါ အရမှာ သကျသီဟ စာချတန်း ကို အောင်မြင် ခဲ့သဖြင့် = အရှင်သေဋ္ဌိလာဘိဝံသ ပရိယတ္တိသာသနဟိတ. ဓမ္မာစရိယဘွဲ့*ကို ရ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဘွဲ့ကိုတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရဲ့ အလေးတစား ကပ်လှူတာဖြစ် လို့ ခံယူခဲ့ ပါ၏။ဆရာတော်သည် သက်တော်(၉၃)နှစ် အရွယ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သာသနာဝင် အမြင့်ဆုံးဖြစ် တဲ့ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရုဘွဲ့ကို ဆပ်ကပ် ပူဇော် ခံရပြီး
သက်တော် ၉၆-နှစ်အရွယ် တွင် သာသနာပြုဘွဲ့ဖြစ်သော
အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇဘွဲ့ဆိုတဲ့ အမြင့်မားဆုံး ဘွဲ့တွေ ကို ဆပ်ကပ် အပူဇော် ခံခဲ့ ရပါတယ်။ဒီသာသနာ ပြုဘွဲ့ကို ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကို ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့အပြား သို့ရောက်အောင် ထူးချွန်စွာ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ခဲ့သောကြောင့်
ရရှိခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။(ပညာစက်ဝန်း)အရှင်ပညာစက္ကာဘိဝံသ(စ.အ ဓမ္မာစရိယ)
ပထမေက်ာ္ဘြဲ႕ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆန္ကာ ထျပန္ခဲ့တဲ့ အရွင္
ပရိယတၱိ နယ္ပယ္မွာ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူး မ်ားစြာ ရွိရာမွာ ပထမေက်ာ္ဘြဲ႕သည္ လည္း စာသင္သားတိုင္း လိုလား ေတာင့္တ တန္ဖိုး အထားဆုံး ဘြဲ႕ တစ္ခုပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို အဆင့္အတန္းျမင့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ကို ရရွိ ခဲ့ေပမဲ့ ဘြဲ႕ကို လက္ခံ ယူ ဖို႔ ျငင္းဆန္ ခဲ့တဲ့ အရွင္ျမတ္ တစ္ပါး ရွိခဲ့ဘူး ပါ တယ္။
ပထမေက်ာ္ဘြဲ႕ကို ျငင္းဆန္ ခဲ့တဲ့ အရွင္ျမတ္ က အရွင္ေသ႒ိလာဘိဝံသ မေထရ္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ၊ ဘယ္ေခတ္ကပါလဲ ဆို တာကေတာ့အရွင္သည္ ၁၉၁၈-ခုႏွစ္၊ ေကာဇာ ၁၂၈၀-ခု ႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ ပထမ ေက်ာ္စာေမးပြဲမွာ တႏိုင္ငံလုံး မွာ ပထမရရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း အဂၤလန္ ဘုရင္ခံထံ ဘြဲ႕ခံရမည့္ စာေအာင္ သံဃာက = ေက်ာင္းသားပမာ ဘုရင္ခံက အထက္ ရဟန္းသံဃာက ေအာက္ ကေန ဘြဲ႕ကို ခံယူရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မခံယူ ပဲ ျငင္းဆန္ ခဲ့ကာ ထျပန္ သြားခဲ့ ပါတယ္။
ဒါ ဘယ္ေလာက္ ဂုဏ္ယူ စရာ ၊ အတုယူ စရာ ေကာင္းလိုက္သလဲ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေန ရမွာပါ။အဂၤလန္ေတြ က သူတို႔ကို သူတို႔သာ ဂုဏ္သေရ ရွိ လူမ်ိဳးဟု ထင္တတ္ၾကၿပီး အျခားလူမ်ိဳးေတြ ကို အထင္ေသးစြာ ဆက္ဆံ တတ္ၾကပါတယ္။အဲဒီလို ရဲ႕ရင့္စြာ ပထမေက်ာ္ဘြဲ႕ကို ျငင္းဆန္ ခဲ့ေသာ အရွင့္ကို မႏၲေလးတိုင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္- အေရွ႕ဘက္ ငါးမိုင္ အကြာ ပုတီးကုန္း႐ြာ ဦးေအး+ေဒၚေထြးတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး -၁၃-ႏွစ္ မွာ ရွင္သာမေဏဝတ္ အသက္၂၀-မွာ ဘဒၵႏၲ အာဒိစၥဝံသမေထရ္ ကို ဥပဇၩာယ္ျပဳကာ ရဟန္း ဘဝေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
အရွင္သည္ ရဟန္း တစ္ဝါအရ တြင္ ေစတိယဂၤ ဏ စာသင္တန္း.သက်သီဟ စာသင္တန္းတို႔ ကို တႏွစ္ထဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ – ရဟန္းႏွစ္ဝါ မွာ ပထမေက်ာ္တန္း ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ ယင္း ပထမေက်ာ္ဘြဲ႕ကို ျငင္းဆန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ရဟန္းသုံးဝါ အရမွာ သက်သီဟ စာခ်တန္း ကို ေအာင္ျမင္ ခဲ့သျဖင့္ = အရွင္ေသ႒ိလာဘိဝံသ ပရိယတၱိသာသနဟိတ. ဓမၼာစရိယဘြဲ႕*ကို ရ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီဘြဲ႕ကိုေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ရဲ႕ အေလးတစား ကပ္လႉတာျဖစ္ လို႔ ခံယူခဲ့ ပါ၏။ဆရာေတာ္သည္ သက္ေတာ္(၉၃)ႏွစ္ အ႐ြယ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သာသနာဝင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ တဲ့ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုဘြဲ႕ကို ဆပ္ကပ္ ပူေဇာ္ ခံရၿပီး သက္ေတာ္ ၉၆-ႏွစ္အ႐ြယ္ တြင္ သာသနာျပဳဘြဲ႕ျဖစ္ေသာ
အဘိဓဇ အဂၢမဟာသဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇဘြဲ႕ဆိုတဲ့ အျမင့္မားဆုံး ဘြဲ႕ေတြ ကို ဆပ္ကပ္ အပူေဇာ္ ခံခဲ့ ရပါတယ္။ဒီသာသနာ ျပဳဘြဲ႕ကို ဗုဒၶဓမၼေတြကို ကမာၻႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား သို႔ေရာက္ေအာင္ ထူးခြၽန္စြာ ကမာၻ႔သာသနာျပဳ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။(ပညာစက္ဝန္း)အရွင္ပညာစကၠာဘိဝံသ(စ.အ ဓမၼာစရိယ)
မြန်မာမလေးလို့ လုံးဝမထင်ရပဲ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ International Model Yolanda Thein
ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား ? မိန်းခလေးတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်
ဖက်ထုပ်များစွာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး ရောင်းချကာ မိသားစုကို ရှာကျွေးနေသော အသက် ၈နှစ်အရွယ် ကောင်လေး